သြစတြေးလျ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 30
Nyein Chan Aye – Poem
ရှိသူများ’ နဲ့ ‘မရှိသူများ’ (‘Haves’ Vs. ‘Have-nots) ငြိမ်းချမ်းအေး ဧပြီ ၈၊ ၂၀၁၃ တကယ်တော့.. တိုင်းပြည်မှာ လူမျိုး/ဘာသာ/အသားအရောင်/လိင် ခွဲခြားပြီး ပြောနေဖို့ မလိုဘူး။ တကယ်တမ်း.. တိုင်းပြည်မှာ ခွဲခြားမြင်တတ်ပြီး ပြောရမှာက ‘ရှိသူများ’ နဲ့ ‘မရှိသူများ’ အရေး ဖြစ်တယ်။ ‘Haves’ Vs. ‘Have-nots’ ကွာခြားချက်ကိုပဲ အသံထွက်ရမယ်..။ ‘ရှိသူများ’ နဲ့ ‘မရှိသူများ’..။ အာဏာရှိသူများ နဲ့ အာဏာမဲ့နေသူများ..။ လုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိသူများ နဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့် မဲ့နေသူများ..။ ‘စံစား’ နေရသူများ နဲ့ ‘ခံစား’ နေရသူများ..။ ဖိနှိပ်နေသူများ နဲ့ အဖိနှိပ်ခံများ..။ အခွင့်အရေး ရနေသူများ နဲ့ အခွင့်အရေး ဆုံးနေသူများ..။...
ဧပြီ အရူးများ ငြိ်မ်းချမ်းအေး ဧပြီ ၁၊ ၂၀၁၃ တကယ် မရူးပါဘဲ ခေတ် “ကောင်း” လို့ ရူးချင်ယောင်ဆောင်နေကြတဲ့ အရူးပါးတွေရဲ့ တိုင်းပြည်မှာ “April Fools” နဲ့ အတူ “အရူးလုပ်ခြင်း” ကို သိလျက်နဲ့.. “သိဒ္ဓိ” တင်ပေးခဲ့ခြင်း ဒီနေ့.. တနှစ်ပြည့်ပြီ..။ အတန်းထဲ အသစ်ရောက်လာလို့ ဈေးခေါ်ကောင်းနေတဲ့ သူလို ကမ္ဘာ့ ကာလသား ပန်းဦးဆွတ်ချင်သူတွေ ဝိုင်းဝိုင်းလည်နေတဲ့ ဒီ တနှစ်အတွင်း.. ကိုကာကိုလာ၊ ဟီလာရီ၊ အိုဘားမားကနေ ဘုန်းတော်ကြီး တူးတူး အလယ်.. မိုက်ကယ်လန်း အဆုံး ဦးခိုက်ရတဲ့ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကြီးတွေအပြည့်နဲ့ ဒီ တနှစ်အတွင်း.. မိုဘိုင်းဖုန်းတွေ ဈေးမကျဘဲနေပါ့မယ်.. ကားမော်ဒယ် အသစ်တွေ မသွင်းရရင် ဒုက္ခဖြစ်သွားမယ်.....
ငြိမ်းချမ်းအေး မတ်လ ၂၆၊ ၂၀၁၃ “Turning and turning in the widening gyre The falcon cannot hear the falconer; Things fall apart; the center cannot hold; Mere anarchy is loosed upon the world, ……………….” From “The Second Coming” poem by W. Butler. Yeats (1865 -1939), Irish Poet, 1919. အာဖရိက ခေတ်သစ် စာပေရဲ့ ခေါင်းကိုင်ဖခင်ကြီးလို့ သတ်မှတ်လေ့ရှိတဲ့ နိုင်ဂျီရီးယား...
ငြိမ်းချမ်းအေး မတ်လ ၁၆၊ ၂၀၁၃ လက်ပံတောင်းတောင် အစီရင်ခံစာ အပေါ် ဆရာကျော်ဝင်း အမြင် ဆောင်းပါးကို မိုးမခမှာတင်လို့ ဖတ်လိုက်ရတယ်။ ပြန်ပြောစရာတွေ ရှိလာတယ်။ ရိုးရိုးလေး.. တွေးကြည့်ပါ..။ ခု ကော်မရှင် က အကြံပြုထားတဲ့ ဒေသခံတွေအတွက် လုပ်ပေးရမယ့် ကိစ္စဆိုတာ မူလ အခွင့်အရေး နဲ့ ရပိုင်ခွင့်ပါ။ သူတို့မြေတွေ ကို သွားသိမ်းရင်၊ သူတို့ ဒေသမှာ စီးပွားသွားလုပ်ရင်၊ သူတို့ဒေသရဲ့ လူမှု၊စီးပွား၊ သဘာဝ နဲ့ ရိုးရာ ဓလေ့ ကို ထိခိုက်ရင် ဒီလို နစ်နာကြေးမျိုး၊ လျော်ကြေးမျိုး၊ လူမှုဘဝတိုးတက်ရေး အစီအစဉ်မျိုးဆိုတာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ စီးပွားရှင်က မဖြစ်မနေ ပြန်လုပ်ပေးရမယ့် ကုလသမဂ္ဂကချမှတ်ထားတဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်...
ကိုခင်ဝမ်း လွမ်းချင်း ၊ ရေးသူ – ကိုနေ၀င်း (မဇ္စျိမလှိုင်း) (ဤ ဆောင်းပါးကို မြန်မာသစ် မဂ္ဂဇင်း ၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၊ ၂၀၁၀ တွင် မူရင်း ပုံနှိပ် ဖော်ပြခဲ့သည်။) မိုးမခရုပ်ပုံလွှာ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၁၃ ၊ ငြိမ်းချမ်းအေး စီစဉ်သည် ကိုခင်ဝမ်းကို သူ့ရဲ့ “နှင်းဆီဖြူရဲ့ အဝေးကလူတယောက်” စီးရီးမှာ စပြီး ကြားဖူးပါတယ်။ အဲဒီနောက်တော့ “ပြည်မှာဆောင်း” စီးရီးတို့ဘာတို့ပေါ့။ နောက်တော့ သူ့ သူငယ်ချင်းတွေက မိတ်ဆက်ပေးလို့ ကိုခမ်ဝမ်းနဲ့ ကျွန်တော် လူချင်း ခင်သွားကြပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ခရမ်းပြာအဆောင် မှာပါ။ အဲဒီတုန်းက ကိုရဲလွင်က ခရမ်းပြာအဆောင် မှာနေတယ်။ ကိုခင်ဝမ်းနဲ့ ကိုရဲလွင်တို့က ကျောင်းနေဘက်တွေ...
ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း ကိုခင်ဝမ်း ၊ ရေးသူ – ကိုရဲလွင် (မဇ္ဈိမလှိုင်း) (ဤ ဆောင်းပါးကို မြန်မာသစ် မဂ္ဂဇင်း ၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၊ ၂၀၁၀ တွင် မူရင်း ပုံနှိပ် ဖော်ပြခဲ့သည်။) မိုးမခရုပ်ပုံလွှာ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၃၊ ၂၀၁၃ (ငြိမ်းချမ်းအေး စီစဉ်သည်) ကိုခင်ဝမ်းနဲ့ စပြီး ခင်တာကတော့ ကျွန်တော် ကိုးတန်း ကျောင်းသား ဘ၀မှာပါ။ ကိုခင်ဝမ်းက ပြည် ကနေ ရန်ကုန်ကို ကျောင်းလာတတ်တယ်။ အလုံ မှာရှိတဲ့ “United Christian High School (U.C.H.S)” ကျောင်းမှာ ကျောင်းအိပ်၊ ကျောင်းသား (ဟောစတယ်) လာနေပါတယ်။ အဲ့ဒီ ကျောင်းကတော့ အခု အလုံအမှတ် (၄)...
မောင်နောင်မွန် – လောင်ကျွမ်းပြာကျပြီးနောက် -၃ https://t.co/VIOtEWLoCV https://t.co/esoVNo6IXl about7hours ago ReplyRetweetFavorite
မောင်လူရေး – ကိုကိုရဲ့ ညီမလေးအချစ် (၁) https://t.co/Fh9b5PfYw5 https://t.co/3sig8nKTA0 about 13 hours ago ReplyRetweetFavorite
မောင်မိုးသူ – ကျဉ်းထဲ ကျပ်ထဲနှင့် ဘကြီးမိုး https://t.co/oFOqmTpql1 https://t.co/CGiJzMqEOn about 23 hours ago ReplyRetweetFavorite